Momba anay - Yuhuan Zhanfan Machinery Co., Ltd.
Yuhuan Zhanfan Machinery Co., Ltd., dia mpanamboatra matihanina ho an'ny faritra vy metaly tsy metaly ary orinasa manana haitao avo lenta tafiditra ao anatin'ny fikarohana & famolavolana, namboarina tsy tapaka, famokarana, varotra ary serivisy. Niorina tamin'ny 2002,. miorina ao amin'ny 'CITY OF VALVE' - Faritra Indostrialy Yuhuan, Taizhou, faritanin'i Zhejiang, miaraka amina fitaterana mety mankany Ningbo sy Seranan-tsambon'i Shanghai ary ny toerana lehibe rehetra.
Miasa maherin'ny 15 taona ny miasa mafy, amin'ny maha mpikambana iray ao amin'ny fikambanan'ny metrology metatra rano China, dia nahazo laza tsara teo amin'ny tsenam-pirenena i ZHANFAN ary nomem-boninahitra hanolotra serivisy sy vokatra ho an'ireo orinasa mpitaingina rano 10 ambony nasionaly sy orinasa namana maro hafa. . Ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny simika, ny fiarovana ny rano, ny fananganana an-tanàn-dehibe, ny petrochemical ary ny indostria hafa.
Izy io dia manana velaran-tany manodidina ny 7000m2 sy faritra manorina manodidina ny 17000 m2 miaraka amin'ny fitaovana 300 & mpiasa 200.
Ny vokatra indrindra dia ny metaly fametahana metaly vy, fantsom-pifandraisana vy tsy misy fangarony, vatan-drano vy tsy misy fangarony vy, vy maro karazana, valizy vy tsy mihetsika, sns.
Miaraka amin'ny masinina mamorona metaly avo lenta, ivon-milina mandeha ho azy, CNC Lathes, milina masera, milina Passivating, milina fandavahana automatique ary fitaovana maro hafa, ary koa ireo fitaovana fanandramana: spectrometer, milina fitiliana am-pahefana & tester famafazana sira, sns, ZHANFAN dia afaka hanolotra ny kalitao matihanina ary hatolotra eo noho eo ho an'ny mpanjifa hajaina rehetra.
ZHANFAN manao ny kalitaon'ny vokatra toy ny ain'ny orinasa, manaraka ny takian'ny mpanjifa amin'ny maha-ivon-toerana azy, mametraka ny rafitra fitantanana ary mamokatra ny entana araka ny fenitra nasionaly sy indostrialy. Ankoatry ny fanamarinana ny ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001, ZHANFAN dia nahazo Patanty marobe ho an'ny metatra rano Stainless Steel.
Ny orinasa dia manaraka ny hevitry ny orinasa "ny kalitao dia avy amin'ny asa, ny asa dia miteraka finoana tsara, ny finoana tsara natao ny marika" mba hanatsarana ny fifaninanana sy ny fizarana tsena ny orinasa. Manolotra serivisy tonga lafatra kokoa ho an'ny mpanjifa ho an'ny rahampitso tsara kokoa miaraka amin'ny paikady mahafinaritra, tombony amin'ny marika, fanahy azo tsapain-tanana ary ireo vokatra kalitao tsara kokoa.